विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा, ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७५-०९-२ | 2018-Dec-17
विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा, ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा
२०७५-०६-१८ बिचार / प्रतिक्रिया
एनआरएनको विधानमा के–के हुँदैछ परिवर्तन ?
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले आफ्नो पहिलो गैरआवासीय ग्लोबल विज्ञ सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । एनआरएनको आयोजनामा आगामी १२ देखि १४ अक्टोबरसम्म काठमाडौंमा हुने सम्मेलनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको एनआरएनका सल्लाहकार डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए । विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका नेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने विदेशी विज्ञहरुसँग नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा व्यावसायिक संस्थालाई जोड्ने अभिप्रायले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको शर्माले बताए । सम्मेलनका संयोजकद्वय डा. हेमराज शर्मा तथा कुमार पन्तले काठमाडौंमा आयोजना हुने विज्ञ सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी गराएका छन् । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अहिले धमाधम दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
आयोजक समितिका तर्फबाट शर्मा र पन्तले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंस्थित होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा हुने कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । १२ अक्टोबरमा बेलुकी ५ बजे प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्व, संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका तथा विदेशी विज्ञहरु र वैज्ञानिकहरु सहभागी हुने कार्यक्रममा १ सय ७० प्रस्तुती रहनेछ । सहभागीलाई अनलाइनमार्फत रजिष्ट्रेशन गर्न आग्रह गरिएको छ भने ५ सयभन्दा बढीले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत १२ अक्टोबरमा उद्घाटन सत्र र सहभागीहरुका लागि रात्रिभोजको आयोजना गरिएको एनआरएनले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो दिन चारवटा प्लेनरी सत्र आयोजना गरिएको छ । नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको नीति, प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था, ज्ञानमा आधारित आर्थिक विकास र देशले लिने आर्थिक विकासको पक्षका बारेमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, नयाँ प्रविधिको सम्भावना, लगानी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय प्रदूषण, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।
एनआरएनले आफ्नो विधान सम्मेलनसमेत गर्ने भएकाले विज्ञ सम्मेलनलाई समयमै सक्नेगरी तयारी गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट प्राप्त प्रस्तुतीका लागि हरेकलाई पाँच मिनेटको समय दिइनेछ । १३ र १४ अक्टोबरमा हुने छलफल पावर प्वाइन्टको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनका लागि एनआरएनले छुट्टै वेबसाइटसमेत निर्माण गरेको छ । कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशका उदाहरणीय विकास निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरिङ टोलीको समेत सहभागिता हुने भएको छ । पहिलो दिनका सबै सत्रहरु नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुनेछन् । सम्मेलनका लागि अनुमानित १ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । खर्चका लागि विभिन्न क्षेत्रका स्पोन्सरबाट संकलन गरिएको छ । एनआरएनका अध्यक्ष भावन भट्ट, उपाध्यक्ष कुमार पन्त लगायतका विभिन्न देशमा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा सफलता प्राप्त गरेका व्यक्तिले आर्थिक सहयोग गरेको कार्यक्रमका संयोजक शर्माले जानकारी दिए । विज्ञ सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले यसबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा आशा गरिएको छ ।
एनआरएनले अब हरेक दुई–दुई वर्षमा विज्ञ सम्मेलनका रुपमा काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । कार्यक्रमले ज्ञान, सीप, पूँजीको बिकासका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग पुग्ने एनआरएनको अपेक्षा छ । तर, प्राज्ञिक सम्मेलन बहुआयामिक बनाउने भनिए पनि यसलाई व्यावहारिक बनाउने दिशातर्फ भने खासै ध्यान दिइएको छैन । नेपाल सरकारको साझेदारीमा सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको शर्माले बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा सम्मेलन सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म झण्डै २ सय कार्यपत्र प्राप्त भइसकेका छन । नेपालका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेका विदशी विज्ञहरुलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । खासगरी हामीजस्तै परिवेश भएका, तर छोटो समयमा विकास गरेका देशका विज्ञलाई कार्यक्रममा बोलाइएको एनआरएनले जनाएको छ । नयाँ दिल्लीका मेट्रो इन्जिनियर लगायत इटली, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाका १० जना विदेशी विज्ञलाई कार्यक्रममा बोलाइएको संयोजक शर्माले बताए ।
के–के हुँदै छ एनआरएन विधान सम्मेलनमा ?
एनआरएनले काठमाडौंमा हुने विधानसभामा सहभागी हुन आफ्ना सबै सदस्यलाई आह्वान गरेको छ । संघका महासचिव डा. बद्री केसीले विज्ञप्ती निकालेर अक्टोबर १२ मा काठमाडौंमा हुने विधानसभामा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले अक्टोबर ११ भित्र अनिवार्य रुपमा नाम दर्ता गराउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसीसीलाई आग्रह गरेका छन् । यस पटक सहभागी हुनका लागि १ सय अमेरिकी डलरसहित नाम लेखाउनु पर्नेछ । संघको विधानको दफा २९ को उपदफा ३ बमोजिम विधानसभामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तत्कालीन, निवर्तमान र संस्थापक पदाधिकारी, सदस्यहरु, सल्लाहकार, हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष वा निजले तोकेको एक जना प्रतिनिधि, विभिन्न समितिका संयोजक र आईसीसीले तोकेका १० जना विधानसभामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । विधानसभामा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई विज्ञ सम्मेलनमा समेत सहभागी गराइने महासचिव डा. केसीले जानकारी दिए । विधानसभा पनि होटल सोल्टीमा अक्टोबर १२ मा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म हुनेछ ।
एनआरएनको विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिवले एनसीसी र आईसीसीमा पेश गरिसकेका छन् । संशोधनका लागि विभिन्न पक्षहरु समेटिएको छ । संघमा ५ विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार, व्यापार तथा लगानी, मानवकल्याण, ज्ञान सीप र नवप्रवर्तन, सांगठनिक तथा प्रशासनिक विभागको प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच विभागको नेतृत्व पाँच उपाध्यक्षलाई दिने र आईसीसीका सदस्यहरु विभागका सदस्य रहने प्रस्ताव तयार पारिएको एनआरएनका सल्लाहकार एवम् विधान संशोधन समितिका संयोजक डा. हेमराज शर्माले बताए । उपाध्यक्ष बन्नका लागि कम्तीमा पनि दुई वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उपाध्यक्ष मध्यपूर्व, मलेसिया जस्ता देशबाट चुनिने व्यवस्था गर्ने, हरेक विभागलाई हर्नेगरी सचिवालयमा एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्तावमा रहेको छ । अध्यक्षलाई सहयोग गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था नरहने राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भई निर्वाचनमा भाग लिन कम्तीमा २ वर्ष पञ्जीकृत सदस्य भएको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिहरुको संख्याको ५० प्रतिशत आईसीसी र एनसीसीमा काम गरेका व्यक्तिहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट छानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या घटाइएको छ । प्रतिनिधिको नामावली अनिवार्य रुपमा एक महिना पहिले सचिवालयमा पठाउनुपर्ने, प्रतिनिधि छनोट र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन निर्वाचन समितिले गर्ने, सचिवालयका कर्मचारी र सम्भावित उम्मेद्वारहरु संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै, एनसीसीहरुको अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा बढीमा ३ महिना र कम्तीमा ४५ दिन पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आईसीसीको निर्वाचन समितिले एनसीसीको निर्वाचनको सुपरीवेक्षणसमेत गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एनआरएनको विधान मस्यौदामा मात्र नभएर यस पटकको अधिवेशनमा पछिल्लो समय देखिएको विवादका विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष कुल आचार्य र महासचिव डा. बद्री केसीले समूह नै बनाएर गरिरहेको विवादका विषयमा पनि काठमाडौंमा छलफल हुने भएको छ । एनआरएनमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलको विवाद भित्रिएको छ । वर्तमान कार्यसमितिको गठनपछि शुरु भएको विवाद झन्–झन् चर्किंदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस निकट एनआरएन नेताहरु आचार्य समूहमा लागेका छन् भने पूर्वएमाले निकट नेताहरु महासचिव केसीको समूहमा लागेका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरु समेत विभिन्न समूहमा सक्रिय भएपछि विवाद सुल्झने अवस्था छैन । यसले एनआरएनको उद्देश्य र भविष्यलाई नै अन्योलमा पार्ने निश्चित जस्तै छ ।
इन्द्रेणीमा शनिवार नया समिति
कला समूहले सम्झियो स्वरसम्राट
कांग्रेस महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा हिन्दूधर्मबारे बहस
कैलालीबाट कमलको हुँकार– ‘पार्टी ‘एजेण्डा’मा जनमत बढ्दै छ’
ओली भन्छन् अध्यक्ष छाड्दिन, सरकारले ठूलो परिवर्तन एक वर्षमै देखाउने प्रचण्डको दाबी
काङ्ग्रेस महासमिति बैठक, आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु
तीन लाख वेभसाइट बन्द गर्ने यस्तो रहेछ मन्त्री बाँस्कोटाको योजना
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा ओली–प्रचण्डलाई यस्तो सकस
आधा मिलियन डलर अमेरिकाको आकाशमा पात जस्तै उड्यो
मादक पदार्थ सेवन गराई १७ वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार
महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा देउवा–पौडेलको यस्तो चर्काचर्की
भारतमा मोदी कमजोर बन्दै, भाजपाको पकड क्षेत्रमा काँग्रेस हावी
२०७५-०६-२३ ० बिचार / प्रतिक्रिया
२०७५-०६-१० ० बिचार / प्रतिक्रिया
विधिवाट देशलाई चलाउन खोज्दा पनि विरोध भैरहेको छ
२०७५-०६-३ ० बिचार / प्रतिक्रिया
२०७५-०८-१२ ० बिचार / प्रतिक्रिया